Iyo Yakanakisa Fenicha Kune Yako Hofisi Hofisi | Trivoshop
musha nhau Iyo Yakanakisisa Fenicha Yako Hofisi Imba
Iyo Yakanakisisa Fenicha Yako Hofisi Imba
Makambani mazhinji, kusanganisira makambani makuru seMicrosoft, anotendera vashandi vavo kushanda kure kubva kumba kwavo. Kana iwe uri mumwe wavo, iwe unogona kunge uchiziva kukosha kwekuva nenzvimbo yakatsaurirwa kwaunonzwa wakasununguka kuita basa rako rakanakisa zuva nezuva. Kuti uwane kugadzirwa kunodiwa uye kunyaradzwa muhofisi yako yekumba unofanirwa kunge uine fanicha chaiyo.
Paunenge uchisarudza yako yemumba hofisi fenicha, teerera kune kwayo mashandiro uye kuti zvinonakidza sei zvingave zvichinge zvichinge zvichinakidza mushure memaawa masere ekuishandisa. Zvichienderana nerudzi rwebasa rako iwe uchazoda imwe tafura uye chigaro. Zvimwe zvigaro zvevaenzi zvingave zvakanaka kuve nazvo kana vatengi vako vakasarudza kukushanyira.
Kutora Tafura YeImba Yako Yekumba Hofisi
Rudzi rwebasa rauchange uchiita, uye zvishandiso zvaunoda zvichave zvine zvakakosha paunenge uchisarudza tafura. Heano dzimwe nzvimbo dzaunofanira kufunga nezvako paunotora padhesiki rako.
Musoro wedhesiki rako unofanirwa kunge wakareba uye wakadzika zvakakwana kuti maturusi ese aunoda akwane. Pamwe iwe unoshandisa chete laptop, asi kana rako basa richida maviri desktop monitors kana nzvimbo yezvakanyorwa magwaro uchafanirwa kusarudza tafura ine yakakura nzvimbo.
Iwe unenge uri kushandisa yakawanda yenguva yako padhesiki iri, saka ita shuwa kuti zvakanaka kugara pasi. Iwe uchafanirwa kunge uine cheya yemhando zvakare, asi isu tichataura nezvazvo gare gare. Iri rakanakisa ergonomic tafura inochengetedza majoini ako pamakona akakodzera. Mamwe madhesiki anouya nemakumbo anoshanduka, kuti iwe ugone kumisikidza kureba uye chinzvimbo chaunoda.
Kana zvese zvishandiso zvako zvisina kunyatso waya, uchafanirwa kufunga nezve kuti zvichave nyore sei kuvhara tambo dzese dzauinadzo. Monitor, light, printer, mobile charger, router, nezvimwewo Tsvaga tafura ine tambo chiteshi, uye gomba diki rekuvadzivirira kubva munzira yako.
Iyo Offex Crank tafura inogadziriswa yakamira tafura iyo inokupa iwe kugona kuwana iwo unobudirira muyero wekugara uye wakamira mukati merefu rebasa rebasa.
Kusarudza Sachigaro Akakodzera Kune Yako Hofisi Hofisi
Paunenge uchinhonga chigaro, saizi yacho ndeimwe yezvinhu zvakakosha zvaunofanira kutarisa.
Kureba kwechigaro kunogona kusiyanisa kubva pamasendimita gumi nematanhatu zvichikubvumidza kuti uigadzirise zvinoenderana nekukwirira kwakakukodzera. Chigaro chako chinofanirwa kunge chakaita masendimita 16-21 paupamhi, uye saizi yakakodzera yekumashure ndeye 17-20 inches paupamhi.
Usati watora chigaro chehofisi yako yekumba, ita shuwa kuti chakagadzirwa kubva kumucheka wekufema, uyo unofungidzirwa kuti ndiwo wakanaka.
Activechair Ergonomic Hofisi uye Mutambo weGaming, 7-nzira Inogadziriswa
Yakakwana Desk Mwenje
Pamwe pamwe nehusiku hwemasikati, uye mwenje usingadzimiki wedenga, mwenje wakanaka wedhesiki unozokupa iwe multidirectional mwenje, iyo inoderedza kushushikana kwemaziso nekutsamwa Mhando dzakasiyana, mwenje yematafura anodzikisira musiyano uripo pakati pechinhu chauri kutarisa nenzvimbo yakatenderedza. Nenzira iyi, iwe unenge uine tarisiro iri nani pane ruzivo pasina kuve nemusoro. Uchishandisa mwenje unotonhorera kune mwenje wedhesiki rako, iwe unozonzwa uchiwedzera kuita uye uchishanda.
Kupesana nemagetsi anotonhora, yero inogona kudzikamisa pfungwa dzako uye nekukubatsira iwe kugadzirira kurara mushure mehusiku-husiku basa. Iko kubatana pakati pekupisa kwemavara nekugadzirwa hakutsanangurike, asi vamwe vanhu vangangoda mwenje unodziya kwemaawa marefu ekushanda, zvinoenderana nehunhu hwavo uye nemabasa ebasa ravo.
Dainolite Yakashongedza Nhema Desk Mwenje
Kugadzira hofisi yemumba inobereka inotanga nedhesiki chairo. Tafura yakakwana inokwana nzvimbo yemahara mumba mako uye inofanirwa kuve nenzvimbo yepamusoro yaunoda kuti midziyo yako irongwe. Kunze kwedhesiki, pedza imwe nguva uchitsvaga cheya chaiyo marita nemagetsi iwe unonzwa kugadzikana uchishandisa anopfuura 40h pasvondo.
Yakanyorwa mu: midziyo, hofisi
Previous nyaya Nzira yekutenga Yakakodzera Resistance Bhendi Iwe
inotevera Wepamusoro 5 Zhizha Runako Runokosha Zvechiso Chako, Muviri uye Bvudzi